बिहिवार, मंसिर ५, २०७६ ०४:३९:०२
शनिवार, जेठ १८, २०७६ News Missile
अघिल्लो बजेटमा आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट आलोचित बनेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेपछि भने सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छन्।
प्रतिपक्षले प्रचार र वितरणमुखी भनेर आलोचना गरेपनि चुनावमा गरेका केही वाचा पूरा गर्ने गरी खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा चुनाव मुख्य नारा बनाइएको एकल महिलाको भत्ता र वृद्धाभत्ता वृद्धिको विषय सम्बोधन गरिएको छ।
निर्वाचनको क्रममा पाँच वर्षमा पाँच हजार भत्ता भनेकोमा दोस्रो बजेट ल्याउने क्रममा ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धाको दुई हजारबाट भत्ता बढाएर तीन हजार पुर्याइएको छ। त्यस्तै, संघीय जनप्रतिनिधिलाई जनतासँग जोड्ने कार्यक्रमको रूपमा हेरिएको स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
सांसदहरूले १० करोड माग गरेपनि अघिल्लो बजेटमा खारेज गर्ने तरखरमा रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले एक निर्वाचन क्षेत्र बराबर छ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।
यो कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले खुशी व्यक्त गरेका छन् । यसले समग्र विकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा. डा गोविन्द पोखरेलसँगको कुराकानी :
बजेट समग्रमा कार्यान्वयन केन्द्रित भयो भने एउटा लय त समाउने देखियो नि हैन? रोजगारी र उद्योगवर्गमा यसले दिएको प्राथमिकता पनि बढी छ?
०४८ सालको बजेटदेखि हेर्ने हो भने फजुल खर्च घटाउने र सुधारको लागि काम गर्ने गरी तत्कालिन सरकार केही आलोचित पनि भयो। व्यापक ऋण घटाउनेतर्फ वितरणमुखी नगराउने प्रयास गरिएको थियो। स्वास्थ्य शिक्षामा केन्द्रित थियो।
अहिलेको बजेटमा त्यस्तो देखिएको छैन। ऋण लिएर खर्च गर्ने भनिए पनि बजेट छूट्टयाइएको छ। त्यसलाई पारदर्शी रुपमा दुरुपयोग नगरीकन गर्न सक्यो भने उपलब्धीमूलक देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम अघिल्लो वर्ष खर्च हुन सकेन अहिले बढाएर फेरी विनीयोजन गरिएको छ। निर्वाहामुखी संस्कारमा लागको देखिएको छ।
अनिवार्य दायित्व घटाउनु पर्ने भनिएको थियो तर घट्नुको सट्टा बढे जस्तो फरक देखिएको छ। यसलाई कसरी घटाउन सक्ने देखिन्छ?
फजुल खर्च घटाउनुको साटो बढाइयो। घटाउने प्रयाप्त ठाउ थिए । तर त्यता लागिएन यसले भने राम्रो गर्दैन।
समग्रमा कसरी लिनु भएको छ बजेटलाई?
ऋण लिएर समाजवादउन्मुख बजेट ल्याउदा खेरी केहि वर्ग अवश्य पनि खुशी हुन्छन्। उदाहरणको लागि अहिले ९ सय ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ९ सय ५७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च राखेको छ। राज्स्व लक्ष्य मात्रै हो। अहिले पनि लक्ष्य अनुसार कर राजश्व उठ्न सकेको छैन। अरू विकास निर्माण चाहे सडक पुल सबै ऋण लिएर गर्नु पर्ने देखियो।
आन्तरकि र बाह्य गरी गरी पाँच खर्ब लिएर विकास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। यसले के दखाउछ भने हाम्रो कमाई जति तलवमा जाने जनताको टाउकोमा ऋण थपेर विकास गरिएको छ। बजेटको आकार यति ठूलो गर्न जरुरी छैन। वितरणमुखि बाँड्नको लागि ठूलो रह्यो।
पुराना आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन् यो तर राम्रै हो नि हैन?
पानी जहाज र रेलका कुरा पहिले आएका थिए शव्दमा राखिए पनि जल यातायातमा केही पैसा होला। अहिले निर्माणमा हुलाकी राजमार्ग मध्यपहाडी राजमार्गमा प्राथमिकता दिइएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा अनुसाशन कायम गर्ने प्रयास भने गरिएको छ। निर्माणको क्षेत्रको गुणस्तरमा सुधार गर्ने प्रयास गरिएको छ।
कार्यान्वयनमा आए राम्रो हुन्छ। कच्चा पदार्थ आयात गरेर उद्योगको विकास गरिएको छ। मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो। गत वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा आलोचना पनि कम भएको देखिन्छ कहाँ सुधार गरेको देख्नु हुन्छ?
देश जहाँ जाने जाओस् म चाहि आलोचित नभएको पुग्यो भनेर बजेट आएको छ। कर्मचारीलाई तलव बढाउनु ठिकै हो तर कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्नको लागि बजेट देखिएको छैन। आवश्यक नै नपरेको छेत्रमा पनि फजुल खर्च छुट्टयाइएको छ।
क्षमता आए वृद्धि गर्ने वाकांश त लेखिएको त छ?
बजेट नभएपछि कसरी हुन्छ। लोकसेवा पास गरेर जागिर खाँदैमा सर्वविज्ञ हुने हैन। क्षमतामा ज्ञान भएको कारणले गर्दा समस्या भएको छ। कस्तो पेनाल्टि गर्ने गर्नु पर्छ। गुणस्तरमा अनुगमन गर्ने यस्ता काममा क्षमता कमजोर रहेको छ। संयन्त्रको विकास गर्नु पर्छ। त्यस्तै छिटो निर्णय लिन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्छ। निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण गर्ने गर्नु पर्छ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, जेठ १८, २०७६, ०९:०६:००